FJKM Ankadifotsy MAHASOA NY HODIM-BOASARY , AZA ARIANA INTSONY ! / Hainao ve / Autres / Accueil - FJKM Ankadifotsy
MAHASOA NY HODIM-BOASARY , AZA ARIANA INTSONY !12/05/2015 22:08
Mandevona ny menaka ratsy ao amin’ny rà, mampahia, miaro amin’ny karazana homamiadana...
MAHASOA NY HODIM-BOASARY , AZA ARIANA INTSONY !
Mandevona ny menaka ratsy ao amin’ny rà, mampahia, miaro amin’ny karazana homamiadana , mampiakatra ny hery fiarovana ao amin’ny vatana…santionany amin’ireo soa entin’ny hodim-boasary ireo. Tena tsy mba fanary marina e ?
Miaro ny fo sy ny lalan-drà
Manakarena singa mpanohitra arafesina ny hodim-boasary ka miaro ny fo sy ny lalan-drà. Manampy ny vatana handevona ny menaka ratsy ao amin’ny rà izy, izany oe miaro amin’ny fahatapahan’ny lalan-drà, sy ny fiakaran’ny tosi-drà.
Ny filoham-pirenena rosiana hono tena mahavàtra mihitsy manisy hodim-boasary amin’izay sakafo rehetra haniny, na mamy io na masira, mba hitaizany ny fo sy ny lalan-dràny.
Miaro amin’ny sery sy gripa ary ny areti-tratra
Mazava ho azy, satria amin’ny hodim-boasary no tena ahitana otrikaina C sy A bebe kokoa noho ny amin’ny nofony.
Mahavàra ary misotro dite vita avy amin’ny hodim-boasary, ohatra in-droa isan’andro. Afaka ampiana tantely raha hitsaboana areti-tratra toy ny kohaka sy sohika.
Manampy amin’ny fandevonan-kanina
Misy singa ao amin’ny hodim-boasary mitondra ilay bakteria tsara ilain’ny tsinay ahafahany manao ny asany tsara (misintona ny otrikaina entin’ny sakafo sy misoroka ny fitohanan’ny fivalanana). Ny manana olana amin’ny vavony koa dia amporisihina hihinana azy ity matetika. Toy izany koa ireo izay tsy mahavita mandevona ara-dalàna ny siramamy sy ny asidra ao amin’ny vatany.
Misoroka ny homamidana
Ny fikarohana nataon’ireo siantifika dia nanaporofo fa ny olona zatra mihinana hodim-boasary dia voaaro kokoa amin’ny homamidana indrindra ireo mpahazo ny hoditra sy ny vavony.
Manampy amin’ny fampihenana vatana
Noho ny hodim-boasary mandevona menaka, mandrindra ny fatran’ny siramamy ao amin’ny rà ary manampy amin’ny fandevonan-kanina, dia sokajiana ho isan’ny sakafo mampahia izy.
Mario tsara fa :
Ilay faritra mavo ivelany iny ihany no tena ilaintsika. Iny no kikisana ka eo amin’ny 1 sotrokely sy tapany eo dia efa ampy hanaovana dite. Ampangotrahina amin’ny rano izany ary avela hivadibadika eo amin’ny 10 min eo vao esorina eo am-patana. Avelao hisarona 5min vao sokafana. Sotroina in-droa isan’andro tsy asiana siramamy raha entina hampihenan-danja, afaka ampiana tantely kosa ra ha hitsaboana areti-tratra na sery sy gripa.
Nanangona RANDRIATSARA Iony